morning - Synonyms of morning | Antonyms of morning | Definition of morning | Example of morning | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for morning
Top 30 analogous words or synonyms for morning
တိုက်စိုး Good morning miss Dove (1955) ကို (မင်္ဂလာပါဆရာမ) အမည်ဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သည်။
ဂူအမ်ကျွန်း မြောက်ကိုရီးယားက အမေရိကန်ပိုင်သည့် ဂူအမ်ကျွန်းကို ဒုံးကျည်နှင့် ပစ်ရန် အစီအစဉ် ဆွဲထားကြောင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ပြောသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယား ထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးကျည်နှင့် အချက် ၆၀ လောက် ပစ်လျှင် ဂူအမ်ကျွန်းလေးသည် မှုန့်မှုန့်ညက်ညက် ကြေနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။ ဂူအမ်ကျွန်းတွင် နေထိုင်သူများက နှစ်နိုင်ငံကြားက မြေစာပင် ဖြစ်မည်လားဆိုကာ အလွန် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် ကြောက်ရွံ့နေကြောင်း ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ထုတ် South China Morning Post သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း On October 15, the CIA's National Photographic Interpretation Center reviewed the U-2 photographs and identified objects that they interpreted as medium range ballistic missiles. That evening, the CIA notified the Department of State and at 8:30 pm EDT, National Security Adviser McGeorge Bundy elected to wait until morning to tell the President. Secretary of Defense Robert McNamara was briefed at midnight. The next morning, Bundy met with Kennedy and showed him the U-2 photographs and briefed him on the CIA's analysis of the images. At 6:30 pm EDT, Kennedy convenedameeting of the nine members of the National Security Council and five other key advisers, inagroup he formally named the Executive Committee of the National Security Council (EXCOMM) after the fact on October 22 by the National Security Action Memorandum 196.
ဆေးဝါးဗေဒ g. Emergency contraception (EC) = Plan B = Morning after pill (T-Pill 72) ဟော်မုန်းပါသော ဆေး၊ လိင်ဆက်ဆံပြီး မြန်မြန် သုံးလေ စိတ်ချရလေ။ ၃ ရက် ရ၂ နာရီ အတွင်းသာလျင် အားကိုးနိုင်။ WHO က ၅ ရက်အထိကြာ သုံးနိုင်တယ်ဆို။ 75% to 89% ထိရောက်။ သားပျက်စေသည့် ဆေးမဟုတ်ဘဲ သန္ဓေမတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးကျိုးများမှာ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ Progestin/progesterone (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံး တကြိမ်တည်း သို့မဟုတ် 0.75 mg (၁၂ နာရီ ခြား) နှစ်ခါခွဲ သောက်နိုင်။ ၈၉% ထိရောက်။ Yuzpe regimen (Estrogen and Progestin) ၁၂ နာရီခြား ၂ ခါသောက်ပါ။
ကရင်စာပေသမိုင်း ထို့ပြင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများလည်း ပေါ်ထွက်လာပြီး ကရင်လူမျိုး အယ်ဒီတာနှင့် ဆောင်းပါးရှင်များ အများအပြားလည်း ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် ထားဝယ်မြို့တွင် ပထမဦးဆုံး ကရင်စာပုံနှိပ်တိုက် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ “ဆာတူဝေါ”ခေါ် မိုးသောက်ကြယ် (The Morning Star) အမည်ဖြင့် ကရင်လစဉ် မဂ္ဂဇင်းကို ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ထာဝယ်မြို့မှာပင် စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤမဂ္ဂဇင်းသည် အာရှရှိ ရှေးအကျဆုံး မဂ္ဂဇင်းများစာရင်းတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့်ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး စတင်ထုတ်ဝေသော မဂ္ဂဇင်းလည်းဖြစ်သည်။ “ဆာတူဝေါ”မဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာမှာ ဒေါက်တာ မေဆင်ဖြစ်သည်။ ထားဝယ်မှသည် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ၁၈၄၇ ခုနှစ်တွင် ဒေါက်တာမေဆင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်းခဲ့သဖြင့် “ဆာတူဝေါ” မဂ္ဂဇင်းကို ၁၈၄၇ ခုနှစ်မှာပင် မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်လက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသွားပါသည်။ “ဆာတူဝေါ” မဂ္ဂဇင်းသည် ဂျပန်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်သည့် အချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း တရာခန့်သက်တမ်းရှိခဲ့ပါသည်။ “ဆာတဝေါ” မဂ္ဂဇင်းနှင့် အရှေးအနှောင်းအချိန်တွင် ဒေါက်တာ အယ်လ်ဘရေတန်က “ဆပ္ပရန်”ခေါ် ပိုးကရင် သတင်းစာတစောင်ကို ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။